जवानीमा हाई हाई, मर्ने बेलामा कोही न कोही ! चर्चित कलाकारको दुखद निधन | समाचार
June 30, 2021 NepstokLeaveaComment on जवानीमा हाई हाई, मर्ने बेलामा कोही न कोही ! चर्चित कलाकारको दुखद निधन
‘पाकिजा’ जस्तो फिल्ममा अभिनय गरेकी गीता कपूरको निधन सन् २०१८ मे २६ मा भएको थियो । गीताको अन्तिम समय निकै कष्टकर बितेको थियो । उनका सन्तानले पनि उनको हेरचाह गरेका थिएनन । गीताको कोरियोग्राफर छोरा उनलाई अस्पतालमा छोडेर भागेका थिए । अशोक पण्डित र अन्य बलिउड अभिनेताहरुले गीताको उपचार खर्च उठाइरहेका थिए ।
सन् १९६७ मा रिलिज सुनिल दत्त स्टारर फिल्म ‘हमराज’बाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी विमी रातारात स्टार बनिन् । फिल्मको गीत हिट भए । फिल्मको सफलताले विमीलाई करिब १० वटा फिल्ममा काम गर्ने मौका मिल्यो । तर मदिराको लत, बढ्दो ऋण र खराब पारिवारिक जीवनले विमीको करियरलाई बिगार्यो । स्टार बनेको १० वर्ष पछि उनको मृत्यु भयो । भनिन्छ, उनको श वलाई एक चियावालाको ठेलामा राखेर आर्यघाट पुर्याइएको थियो ।
हिन्दी फिल्म जगतमा रहीम चाचाका नामले परिचित अभिनेता ए के हंगलको सन् २०१२ अगष्ट २६ मा निधन भयो । उनी यस्ता अभिनेता हुन्, जसले ५० वर्षको उमेरमा बलिउडमा डेब्यू गरेका थिए । उनले ७० देखि ९० दशकको अधिकांश फिल्ममा पिता या अभिनेता अभिनेत्रीको नजिकको आफन्तको भूमिकामा अभिनय गरे । उनी घरमा मृत भेटिएका थिए । उनले जीवनका अन्तिम क्षण यति कष्टपूर्ण थियो कि उनी एक क्षतविक्षत घरमा बस्दथे । उनको छोराले पिताको उपचार गर्न खर्च अभाव भएको बताएपछि अमिताभ बच्चनले २० लाख रुपैंयाँ दिएका थिए ।
प्रख्यात अभिनेता भारत भूषणले आफ्नो करियरमा ‘कालिदास’, ‘तानसेन’, ‘कबीर’, ‘बैजू बावरा’ र ‘मिर्जा गालिब’ जस्ता एकसे एक हिट फिल्ममा अभिनय गरे । तर जीवनका अन्तिम क्षण भने उनका लागि पीडादायी नै रह्यो । उनको सन् १९९२ जनवरी २७ मा निधन भयो । भारतले आफ्नो दाजुको भनाईलाई अनुसार गर्दै ‘वसन्त बहार’ र ‘बरसात की रात’ जस्ता फिल्म बनाएर रातारात पैसा कमाए । उनका भाई रमेशले फिल्म बनाउन उक्साएपछि भाइको भनाईलाई माने पनि उनले बनाएका सबै फिल्म फ्लप भए । उनी ऋणमा डुबे र जसोतसो तिरे । उनले जति कमाएका थिए, सबै ऋण तिरेरै सके । उनको घर, गाडी सबै बिक्री भए । सबै बेच्दा पनि दुःखी नभएका उनले एकदिन घरको पुस्तकालयको पुस्तक रद्दीको भाउमा बेच्नुपर्दा उनी विक्षिप्त भए ।
अभिनेता तथा निर्देशक भगवान दादा फिल्म ‘अलबेला’को गीत ‘शोला जो भड्के’का लागि निकै लोकप्रिय भए । सन् १९१९ मा एक टेक्सटाइल मिल मजदुरको परिवारमा जन्मिएका भगवानलाई शुरुदेखि नै अभिनयको भोक थियो । उनले फिल्म ‘क्रिमिनल’बाट बलिउडमा पाइला चाले । कुनै समयमा बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनलगायका स्टारहरुसँग अभिनय गरिसकेका यी अभिनेताको करियर एकपटक झरेपछि कहिल्यै चढ्न सकेन । आर्थिक समस्याबाट मुक्ति पाउन उनले सानो भूमिकादेखि लिएर हरेक भूमिकामा अभिनय गरे । एकसमय उनको जुहुबीच अगाडि २५ कोठे बंगला थियो । उनीसँग सात गाडी थिए । तर आर्थिक संकट परेपछि उनले सबै बेचेर दुई कोठा लिएर बस्न थाले । उनको निधन सन् २००२ फेब्रुअरी ४ मा भयो ।
ओपी नयरले संगीतको माध्यमबाट बलिउडलाई एकपछि अर्को हिट गीत दिए । उनको जन्म लाहोरमा भएको थियो । उनले आफ्नो करियरको शुरुवात फिल्म ‘कनीज’बाट गरे । उनले फिल्मको पाश्र्वसंगीत दिए । उनले संगीतकारका रुपमा फिल्म ‘आसमान’बाट करियर शुरु गरे । उनलाई कसैले अन्तरवार्ताको लागि प्रस्ताव गर्दा उनी मदिरा र पैसा माग्ने गर्दथे । उनको सन् २००७ मा निधन भयो ।
फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ मा सिमरन अर्थात काजोलको हजुरआमाको भूमिकामा अभिनय गर्ने अचला सचदेवको जन्म सन् १९२० मा पेशावारमा भएको थियो । सन् २०१२ मा उनको एक्लोपनका कारण अस्पतालमा निधन भयो । सन् २००२ मा उनका पति क्लिफर्ड डगलस पीटर्सको निधन भएको थियो । पतिको निधनपछि उनी पूणेमा पुना क्लबसँगै कोणार्क एस्टेट अपार्टमेन्टको दुई कोठे फ्ल्याटमा एक्लै बस्थिइन् ।
अन्तरा मालीका पिता र प्रख्यात फोटोग्राफर जगदीश माली जीवनका अन्तिम समयमा मुम्बईको सडकमा भीख माग्दथे । उनलाई मिंक बरार नामको मोडलले चिनिन्, उनले खाना खुवाइन् र सलमान खानको गाडीबाट घर पुर्याइन् ।
पशुपतिनाथले हामी सबै नेपालीको रक्षा गरुन, असार १७ गते बिहीबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ ?
बाख्राको मा’सुलाई खसी भनेर बिक्री गर्ने २ जना प’क्राउ
ज्वाला संग्रौला दम्पतिको सरकारी कागजात नै नक्कली, कीर्ते गरिएको पुष्टि